7 भर्चुअल वास्तविकता लागि अनपेक्षित प्रयोग अवस्थामा - समाचार नियम
7 भर्चुअल वास्तविकता लागि अनपेक्षित प्रयोग अवस्थामा
हामी सबैलाई थाहा छ हामी VR देखि चाहनुहुन्छ के: राम्रो ठाउँ सिम्युलेटर खेल. शायद चलचित्र हामी वरिपरि मा हेर्न सक्छन्, धेरै. तर उद्योग केवल हाम्रो आशा द्वारा आकार छैन. यो ईन्जिनियरहरु र रचनाकार पूर्ण छ, जो हामी कल्पना गरेको छैन ठाउँहरूमा VR लिइरहेका छन्. यहाँ VR केही उदाहरण हामी अपेक्षा छैन सक्ने गर्दछ छन्.
VirZoom: व्यायाम मजा बनाउने
व्यायाम मजा छैन; यो तपाईं बोरिंग के गर्न ओछ्यानमा आराम छोड बनाउँछ, चिसो मा दोहोरिने कार्यहरू, खैरो वास्तविकता तपाईं बदबू सम्म. VirZoom उबाऊ भाग लक्ष्य. यो barebones, collapsible व्यायाम बाइक ठूलो ब्रान्ड VR गगल्सले उपयुक्त छ र एक खेल मा व्यायाम उत्तेजित गर्दछ. तपाईं बस pedaling गरिरहनु भएको छैन - तपाईं एक unicorn फ्लाई बनाउन छौं, छल्ले वा जे सङ्कलन. यहाँ तत्काल gratification केही छ, र यहाँ बजार मा केहि भन्दा बढी शारीरिक भन्ने केही VR छ.
VR crunches खिसी प्रतीक्षा गर्न सक्दैन. शायद उनि एक Catapult मलाई बारी छौँ!
MindMaze: चिकित्सा परिणत स्ट्रोक विरामीहरु ट्रिकिङ
MindMaze स्ट्रोक अनुभव गरेका छन् मानिसहरू आफ्नो limbs नियन्त्रणमा पुनः प्राप्त गर्न मद्दत कि VR रिसाव गरिरहेको छ. चिकित्सा वैज्ञानिकहरूले पहिले नै अनुसन्धान गरेका, र VR मा कमजोर limb को गति वृद्धि वास्तविक जीवनमा थप स्ट्रोक विरामीहरु यसलाई प्रयोग बनाउँछ. MindMaze पनि एक खेल मा प्रक्रिया wraps, त्यसैले यसलाई कम चिकित्सा नीरस र थप रमाइलो videogame जस्तै जस्तै देखिन्छ. त्यो कसरी हजुरआमा निको पार्न आफ्नै उच्च स्कोर कुट्छ छ.
साँचो 3D: तपाईंको रोगी को अंदर अन्वेषण
तर स्वास्थ्य मा विरामीहरु ट्रिकिङ छैन VR मात्र चिकित्सा प्रयोग हो. EchoPixel डाक्टर आफ्नो विरामीहरु को अंदर दृष्टिगत गर्न मद्दत गर्न आफ्नो VR 3D इमेजिंग प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ. सफ्टवेयर डाक्टर 3D मा विरामीहरु को स्क्यानहरू हेर्न साथै राम्रो सर्जरी लागि तयारी गर्न निश्चित तरिकामा तिनीहरूलाई हेरफेर गर्न अनुमति दिन्छ.
ग्रेस को छालहरू: समानुभूति सिनेमा माध्यम
ग्रेस को छालहरू लाइबेरिया मा एक छ-मिनेट चलचित्र शट भनेर दिन्छ मानिसहरूले इबोला महामारी-प्रहार देशमा बस्ने मान्छे को आघात र आघात अनुभव छ. यो सम्भावित संयुक्त राष्ट्र र उपाध्यक्ष जस्ता विविध संगठन आकर्षित, र यो अवस्था हामी बस्ने मान्छे को लागि सहानुभूति बढ्न मद्दत गर्छ (पहिले) पनि कल्पना गर्न सकेन. यो पनि लुक्न पत्रकारिता मा सम्बन्ध, जो अमेरिकामा बेघर हुन तपाईं कम से कम यो के मतलब को एक झलक समातेर गरौं भनेर सुविधाहरू बनाउँछ.
Samsung र छ वटा झण्डा: रियल भर्चुअल रोलर कोस्टर
VR अघि, हामी लुक्न थिएटर अनुभव थियो, तपाईं एक CGI rollercoaster चलचित्र हेर्नुभयो गर्दा जो एक विशेष डिजाइन सानो घर हेरफेर गर्न हाइड्रोलिक्स प्रयोग. यो अब विगतका कुरा हो, किनभने वास्तविक रोलर कोस्टर चढेर गर्दा अब एक VR सवारी पकड गर्न सक्छन्. मनोरञ्जन पार्क विशाल छ वटा झण्डा आफ्नो रोलर कोस्टरस गर्न VR हेडसेटहरू ल्याउन सैमसंग साथ. को VR अनुभव केही विदेशी आकास मा spaceship लडाई संग रोलर कोस्टर प्रतिस्थापित, अरूलाई सुपर-पुरुष अनुभव बढी ल्याए गर्दा.
वास्तवमा, यो रोलर कोस्टरस कम डरलाग्दो बनाउन एक तरिका जस्तै देखिन्छ!
भर्चुअल वास्तविकता? मेरो अदालतमा? यो तपाईंलाई लाग्छ भन्दा बढी विश्वास गर्न सकिने छ! अपराध दृष्य पहिले नै 3D मोडेल recreated छन्, जो त्यसपछि तिनीहरूले कागज मा मुद्रित हुनुहुन्छ एक पटक 2D गर्न squished छन्. बस केवल घटनास्थल हेर्न भन्दा VR घटनास्थल मनोरञ्जन अदालत अनुभव मा मान्छे गरौं थियो. विश्वविद्यालय ज्यूरिख को पहिले नै प्रहरीले scrutiny पारित गरेको छ कि एक शूटिंग को एक दृश्य recreated छ, त्यसैले न्यायाधीशहरूले र jurors VR मा ट्रेकहरू लिन आशा गर्न सक्छौं.
बनाउन अन्तरिक्ष यात्री घर महसुस
स्पेस यात्रा एकदम केहि समय को लागि दैनिक पर्यटकहरुका लागि prohibitively महंगा रहेको छ. Luckily, त्यहाँ स्पेस VR पर्यटन को लागि योजना हो. तथापि, त्यहाँ अझै पनि मान्छे बाहिर त्यहाँ जाँदै हुनेछ, र सामना शारीरिक क्षरण भन्दा केहि subtler छन् कि खतराबाट. नासा तिनीहरूले जाने जहाँ अन्तरिक्ष यात्री घर को सानो टुक्रो गरौं भनेर VR सफ्टवेयर विकास गर्न डार्टमाउथ को Dali ट्याप छ. यो समुद्र तट मा पिकनिक को एक VR मनोरञ्जन वा आफ्नो सम्पूर्ण घर, यसलाई मंगल यात्रा immeasurably ती मदत गर्ने कुरा हुनेछ.
हेर्नुहोस्? यो VR भविष्य रमाइलो र अनौठो दुवै छ. र सबै भन्दा राम्रो भाग प्रवेश को वर्तमान बाधा राम्रो कम छ. तपाईं एकता र असत्य इन्जिन जस्तै प्रयोगकर्ता-अनुकूल इन्जिन मा सामान कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ 4. नयाँ VR आवेदन को सबैभन्दा कि नेत्रहीन जटिल छैनन्, त्यसैले तपाईं जस्तै स्टक मोडेल साइटहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ CGtrader तपाईंको मोडेल छिटो प्राप्त गर्न. हात मा उपकरण संग, तपाईं मात्र एक विचार आवश्यक. एक Catapult मलाई उत्तेजित गर्दछ कि crunches लागि एक VR पूरक कस्तो?
वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरिरहेका रहस्यमय जाइन्ट होल मा ...
6 भविष्य जूता आविष्कार तिमी हेर्नुहोस् गर्न ...
Dyson गर्म + सुन्दर AM09 समीक्षा: संसारको हुन ...
18123	4 भर्चुअल वास्तविकता
← चिन्तित मानिसहरू को दिमाग विश्व अलग बुझ्ने होस् एन्ड्रोइड एन: गुगल प्रकट ओएस को भविष्य →